अब सार्वजनिक यातायातमा कार्डबाटै पैसा तिर्न सकिने :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
अब सार्वजनिक यातायातमा कार्डबाटै पैसा तिर्न सकिने
सार्वजनिक यातायातमा खुद्राको समस्या कति भोग्नुभएको छ? लकडाउनपछि संक्रमणको डरले खुद्रा फिर्ता लिन डर लाग्छ? अब यस्ता समस्या हट्ने भएको छ।
फिनटेक इन्टरनेशनल प्रालीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको सवारी साधनहरुमा यात्रुहरुले स्मार्ट कार्डमार्फत् भाडा भुक्तानी गर्नसक्ने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ।
यसको लागि कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैकसमक्ष इजाजत पत्रसमेत पाइसकेको कम्पनीका चिफ अपरेटिङ अफिसर अविनभ भट्टराइले जानकारी दिए।
कम्पनीले फागुन १ गतेदेखि २ सय वटा गाडीबाट यो सेवा सुरू गर्ने उनले बताए। त्यस्तै कम्पनीले आगामी ६ महिनामा एक हजार, एक वर्षमा ५ हजार गाडीमा यो प्रणाली राख्ने र पछि उपत्यका बाहिर पनि यो सेवा लैजाने लक्ष्य राखेको छ।
यो प्रणालीले यात्रु र व्यवसायी दुबैलाई फाइदा पुग्ने भट्टराइले बताए।
‘पहिलो कुरा त यात्रु ठगिँदैनन्। दोस्रो गाडीमा कति यात्रु चढे कति पैसा उठ्यो भनेर व्यवसायीले आफ्नो मोबाइलबाट हेर्न सक्छन्,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
मेसिनमा रहेको डाटा सिमले पैसा सिधै व्यवसायीको बैंक खातामा पठाउने उनले जानकारी दिए।
कम्पनीले पहिलो चरणमा वाडभन्ज्याङ–मूलपानी, भंगाल–नयाँबसपार्क, चपली–मातातिर्थ, थली–खसिबजार र रिङरोड लगायतको रुटका गाडीमा यो प्रविधि जडान गर्नेछ।
त्यस्तै यात्रुलाई यो प्रविधिबारे बुझाउन र कार्ड बेच्न उपत्यकाका बस स्टपमा ३० वटा बुथ राखिने भट्टराईले जानकारी दिए। बुथ राख्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग अनुमति समेत लिइसकेको उनले बताए।
यो कार्ड लिन यात्रुले ५० रुपैयाँ डिपोजिट राख्नुपर्नेछ। त्यो कार्डमा एउटा यात्रा निःशुल्क हुनेछ भने अरू यात्रा गर्न रिचार्ज गर्नुपर्नेछ। कार्डवाहक यात्रुले गाडीमा चढेपछि मेसिनको नजिकै कार्ड लगेर नछोइ ट्याब-इन गर्न सक्नेछन्। झर्ने बेलामा पनि ट्याब-आउट गरेपछि आफैं पैसा काटिने भट्टराईले जानकारी दिए।
यात्रुले त्यो कार्ड तीन वर्षसम्म चलाउन सक्ने र बीचमा चिप उप्कने वा बिग्रने भयो भने कम्पनीले अर्को कार्ड दिनेछ।
कम्पनीका अनुसार उक्त कार्डमा विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक तथा फरक क्षमता भएका यात्रुलाई सहुलियत कायम हुने कार्ड वितरण गर्नेछ। हाल १७ वटा यातायात कम्पनी यो प्रणालीमा आवद्ध हुन आएको फिनटेकले जनाएको छ।
व्यवसायीले सेवा लिन सुरुमा कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि कम्पनीले रुट म्यापिङ गरेर नेपाल सरकारले तोकेको भाडा मेसिनमा सेट गर्नेछ। कम्पनीले गाडीमा सहचालकलाई ट्रेनिङ दिएपछि यो प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए।
प्रणाली लिन व्यवसायीले पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। सुरुमा कम्पनीले मेसिन, मेसिन बोक्ने ब्याग र सहचालकलाई तालिम दिनेछ।
त्यस्तै यो प्रणाली प्रयोग गरेबापत दैनिक चार सय रूपैयाँ र भ्याट तिर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २१, २०७७, ०७:३०:००